:: My Little World ::: 2006
အချစ်နဲ့အမုန်း
However we say
And pray till we die,
Only when we are destined to be so
Shall we be united in wedlock.
I hate you, I do hate you,
And curse till we die,
Only when we are fated so
Shall we be separated.
Translated By Maung Thar Noe
Posted by Nay Nay Naing at 11/30/2006 03:47:00 PM0comments
Wanted ဆိုလို့ ဘာဖြစ်တာလဲ လို့လန့် မသွားပါနဲ့ ။ Forword ပို့ တဲ့ အီးမေးတွေ ရောက်လာလို့စိတ်ဝင်စားသူတွေ လျှောက်လို့ရအောင် ဒီမှာပိုစ့် ပေးလိုက်တာ.. သူငယ်ချင်းတွေထဲက စိတ်ဝင်စားသူတွေ သွားလျှောက်ကြပေါ့...
Role of Burmese Male in Rambo4- In The Serpent's Eye
Film - RAMBO 4: IN THE SERPENT'S EYE (Role of Burmese Male)
Thailand/California , Feature Film
Producer: Sylvester Stallone, Kevin King, John Thompson
Writer / Director: Sylvester Stallone
Assoc. Casting Director: Susan Paley Abramson
Start Date: January 2007, Thailand
SUBMIT ELECTRONICALLY (FREE registration for electronic submissions at:
http://www.actorsaccess.com - Actors Access)
ATT: SUSAN PALEY ABRAMSON
RAMBO: CAST (SYLVESTER STALLONE)
We are looking for real Burmese or of Burmese descent. Please note if you are familiar and/or can speak the language. You do not have to be union for this part.
BURMESE MALE - 32-40. Military Man. Character Face. Unlikeable...
Do not submit other asian ethnicities!!! We are strictly looking for burmese people. (not Thai, not Korean, not Vietnamese, not Chinese)
While working asasnake hunter in Thailand, Rambo is hired byagroup of pacifist Christian missionaries to deliver medical and religious supplies to the persecuted Karen people of Burma. After the missionaries are killed or captured, Rambo getsasecond impossible job: to deliverateam of mercenaries to the same place and retrieve the surviving missionaries...
Posted by Nay Nay Naing at 11/30/2006 02:44:00 PM0comments
စိတ်ဝင်စား စရာပါပဲ။ Enterprise level web application development ပိုင်းမှာ ဘာတွေ ပြောင်းလဲ မှု တွေ့ဖြစ်မလဲ။ OpenSource တွေကလည်းများလာတော့ ဘာဟာက ပိုအားကောင်းလားမလဲ မသိဘူး ဖြစ်နေတယ်။ နောက်ပိုင်းဆို Ruby က Web Application မှာနေရာယူလာပြီး၊ Enterprise level မှာတော့ Java ကဆက်ရှိနေမယ့် အလားအလာတွေ မြင်နေရတယ်။
Java က OpenSource လုပ်လိုက်တော့ Enterprise level ပိုင်းမှာ ပိုနေရာရ ပိုကောင်းလာမယ့် ပုံစံရှိနေပါတယ်။ ခုချိန်မှာ Web development ပိုင်းမှာ PHP က အဓိက အသုံးများနေပေမယ့်.. နောင်ဆို Ruby က PHP ကိုကောင်းကောင်း ယှဉ်နိုင်လာပြီး၊ တစ်ချိန်ချိန်ကြရင်တော့ ကျော်တက်သွားမှာမယ့် အလားအလာတွေ ရှိနေတယ်။ ကျွန်မ မြင်သလောက်ကတော့ အားလုံးခြုံကြည့်ရင် OpenSource လောကမှာ Java နဲ့Ruby က Mainstream languages တွေဖြစ်နေမယ် ထင်တယ်။ SUN က JRuby ဆိုပြီး Ruby ကို JVM ပေါ်မှာ run လို့ရအောင်လုပ်နေတယ် လို့ သိရတယ်။ နောက်တချိန်မှာ Ruby ကနေ Java Library Files တွေ အားလုံးကို ခေါ်သုံးနိုင်အောင် SUN က ကြိုးစားတဲ့ အနေနဲ့JRuby ကို လုပ်နေတာပါ။ ဘယ်တော့ ဖြစ်လာမလဲ တော့ မသိရသေးဘူး။ အဲ့ဒီ JRuby က Ruby နဲ့100% compatable ဖြစ်မယ်ပြောတယ်။ တလောကတင် Microsoft ကလည်း Canada က .net developer တစ်ယောက်ကိုငှါးပြီး Ruby ကို CLR ပေါ်မှာ run လို့ရအောင် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုလည်း ဖတ်လိုက် ရသေးတယ်။ တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ဘယ်သူ အရင်ပြီးမလဲ ၊ ဘာက ပိုကောင်းမလဲတော့ မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Ruby က HOT နေတာတော့ အမှန်ပဲ။
နောက်ဆို Linux , Java နဲ့Ruby က တစ်ဖက်၊ Windows, .net(C#,VB.net,ASP.net)က တစ်ဖက် ဖြစ်လာမှာပဲ။ ဘာပဲ ဖြစ်နေနေ ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ Java ကိုတော့ ခုချိန်မှာ စွန့် လွတ်လို့ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ။ ဒီမှာတော့ ဒီနေ့ဖတ်မိတယ့် သတင်းလေးပါ..
According to "Open Java changes Everything," on O'Reilly:
In the medium term (between6and 24 months) expect some interesting packagings of Java to emerge, similar to the way the various Linux Distros work today.
Oracle, IBM, SAP and others already committed to the Java market will become focussed on Java as an even bigger part of the core strategy. Just like the app server market, each will seek to differentiate themselves, perhaps by Service (IBM), byacore database (Oracle) or by leadinganiche (SAP). Expect tension between the desire to differentiate (and fragment) and the GPL which seeks to 'bind them all.'
Microsoft .Net will end up ina'death march' with Java trying to gainalead inafeature set. Open source is very goodamimicking existing products (as it makes an easy spec for dispersed developers to write on - just look at Open Office), so (unless software patents get thrown into the mix), it's hard to see .Net gettingafundamental and lasting edge over the Java Ecosystem.
Source : TheServerSide , OreillyNet
Posted by Nay Nay Naing at 11/29/2006 12:20:00 PM4comments
မနေ့ က အကိုဝမ်းကွဲ တစ်ယောက် ဒီကိုလာလို့အမေက စားစရာတွေ အများကြီးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ပေးလိုက်တဲ့ အထုတ်က သယ်လာတဲ့ တော့ ဘယ်လို နေမလဲ မသိဘူး၊ သွားယူရတဲ့ ကျွန်မ အတွက်ကတော့ တော်တော်လေးတယ်။ ဘာလိုလိုနဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ အမျိုးတွေ တော်တော်များနေပြီ။ မနေ့ က လာတဲ့ အစ်ကိုဆို ငယ်ငယ်ကသာ မြင်ဘူးတာ၊ ကြီးလာမှ ကောင်းကောင်း မတွေ့ဖူးဘူး။ များလိုက်တဲ့ ၀မ်းကွဲ အကိုတွေ မောင်တွေ။ ဘယ်တော့မှ အမ ၀မ်းကွဲ၊ ညီမ ၀မ်းကွဲ အကြောင်းပြောသံ သိပ်မကြားရဘူး။ ကိုယ့်အမျိုးက မိန်းကလေးရှားပြီး၊ ယောက်ျားလေးတွေ များတယ်ဆိုတာကို ခုမှ သိတော့တယ်။ တစ်ခုရှိတာက ခုဒီမှာ ရောက်နေတဲ့ အမျိုးတွေက ကျွန်မကို ကောင်းကောင်း သိနေတယ်၊ ကျွန်မကတော့ သူတို့ ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ ရင် တောင် ကိုယ့်အမျိုးမှန်း ချက်ချင်း မှတ်မိမယ် မထင်ဘူး။ ဒုက္ခပါပဲ ကျွန်မကသာ အိမ်ကို မှန်မှန် ဖုန်းဆက်လေ့ မရှိတာ၊ အဲ့ဒီ အကိုတွေ မောင်ဝမ်းကွဲတွေက သူတို့ရဲ့လေးလေး၊ ကျွန်မရဲ့ မေမေစီကို ပုံမှန် ဖုန်းဆက်ကြတယ်။ နောက်ဆို City Hall သွားရင်တောင် ဒီလူတွေ ဘယ်လို ရှောင်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။ ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး။ ကိုယ်ကလည်း ဘယ်တော့မဆို သူတို့ သိလောက်တဲ့ အကြောင်းအရာ လုပ်ထားတယ်ဆို သူတို့ အရင် အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ပြော ထားတတ်တဲ့ အကျင့်က ရှိပြီးသားပဲ။
မနေ့ က အဲ့ဒီ အကိုနဲ့MRT မှာ တွေ့ ပြီး ပစ္စည်းတွေသာ ယူလိုက်တာ၊ သူ့ ရုပ်ကိုတော့ ကောင်းကောင်းမကြည့် မလိုက်ဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေမေက ဟိုနေ့ က အိမ်ကို ဖုန်းဆက်တုန်းက ဘာစားချင်လဲ မေးတာနဲ့စိတ်ထဲရှိတာ၊ စားချင်တာတွေ လျှောက်ပြောလိုက်တာကို အကုန်ပါအောင် ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ အင်း ဒီရက်ပိုင်းတော့ ညစာကို အပြင်မှာ စားဖြစ်တော့မယ် မထင်ဘူး။ အကုန်အကျ သက်သာတာပေါ့။ မဟုတ်ရင် ညဖက် ဟင်းချက်ရမှာ ပျင်းတာနဲ့အပြင်မှာပဲ ၀ယ်စားဖြစ်နေတာ ကြာပြီ။ ဘာပဲ ပြောပြော ဒီရက်ပိုင်းတော့ အမေ ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ၀က်သားထောင်ကျော်လေးရယ်၊ ပုဇွန်ခြောက် ထောင်းကျော်လေးရယ်၊ ငါးပိကျော် စပ်စပ်လေးရယ်၊ ပုဇွန်ထုတ်ဆီပြန် ချက်ထားတာလေးရယ်၊ ငါးပိထောင်းလေးရယ်၊ ငါးသလဲထိုးကျော်လေးရယ်၊ လက်ဖက်တွေ နဲ့ထမင်းစားလို့ ကောင်း နေတယ်။ ငသလောက်ဥကျော် နဲ့ဝက်နံရိုးကျော် မှာလိုက်ဖို့ ဟာ မေ့သွားတယ်။ ငသလောက်ဥက အရင် စားစရာပို့တိုင်းပို့ နေကြ ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါ ၀ယ်မရလို့ ပဲ ထည်းမပေးလိုက်တာလား၊ မမှာလို့ ဆိုပြီး ထည့်မပေး လိုက်တာလား မသိဘူး။ မပါလာလို့ လားမသိဘူး စားချင်လိုက်တာ။ အင်း… နောက်တစ်ခေါက်တော့ မှာဖြစ်အောင်မှာလိုက်ဦးမယ်။
ဒီနိုင်ငံမှာနေရတာ တခြားဟာတွေ မကြိုက်ပေမယ့် ဒီလို လူကြုံပေါပြီး၊ စားချင်တာ အိမ်ကမှာ စားလို့ ရတာ ကိုတော့ သဘောကျမိသားပဲ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/28/2006 05:50:00 PM6comments
ကျွန်မတို့သူငယ်တန်းမှာ သင်ရတဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ပါ။ ကျွန်မ ကလေးကဗျားလေးတွေကို စိတ်ဝင်စားပြီး၊ ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့ ကြားခဲ့ရတဲ့ ကဗျာတော်တော်များများကို မှတ်မိနေသေးတယ်။ ဒီနေ့ လည်း နေးတစ်ဖိုရမ်မှာ ငယ်ငယ်က သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ မှတ်မိသလောက် ကဗျာလေးတွေထဲကို ပြန်ရေးနေရင်း ဒါလေးရဲ့ အဓိပါယ်လေးကို သဘောကျသွားမိတယ်။ အားလုံး ကျန်မာ ပျော်ရွှင် ကြပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/28/2006 03:22:00 PM0comments
လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်ကျော် နားထောင်ကြည့်ဆိုပြီး ကိုဇာနည်ပို့ ပေးခဲ့တဲ့ အချိန်က စပြီး၊ ခုချိန်ထိ အမြဲ နားထောင်ဖြစ်နေတဲ့ သီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။
ဒီသီချင်းက ကော်ပီသီချင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ မူရင်း Title က Treasure the World ပါ။ ဒီသီချင်းဟာ ASIAN-JAPAN EXCHANGE 2003 / J-ASEAN POPs အတွက် သီချင်းဖြစ်ပြီး၊ English နဲ့Japan Version ကို Chika Yuri ကသီဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီသီချင်းရဲ့ Melody ကို Kazufumi Miyazawa ကဖန်းတီးခဲ့ကာ English Lyrics ကို Dick Lee ကရေးစပ်ပြီး၊ Japan Lyrics ကိုတော့ Taeko Onuk ကရေးခဲ့တာပါ။ ကျွန်မတို့Myanmar လိုကိုတော့ ကိုမြင့်မိုးအောင်က ရေးပြီး Iron Cross က တီးခပ်ကာ လေးဖြူက သီဆိုပေးခဲ့ပါတယ်။
ဒီသီချင်းကို တစ်ခြား Asia နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Viet Nam) တွေကလည်း သူတို့ ဘာသာစကားတွေနဲ့ပြန်ဆိုခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီ တခြား Versions တွေ နားထောင်ဘူးတဲ့ ZNMT နဲ့THKZ ကတော့ အားလုံးထဲမှာ မြန်မာ Version က အကောင်းဆုံးလို့ပြောပါတယ်။ ဒါပေ့မယ် တစ်ခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ သီချင်းတွေမှာ သူတို့ နိုင်ငံဂီတရဲ့ ရိုးရာ music style တွေပါတယ်လို့ ပြောပါသေးတယ်။ ဒီမြန်မာ သီချင်းကတော့ အနောက်တိုင်းဟန် ဆန်ပြီး၊ ကော်ပီကူးတဲ့ အတွေ့ အကြုံများပြားတဲ့ အတွက်ကြောင့် တခြား Versions တွေထက်သာလွန် ပိုကောင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။
Treasure The World - Lay Phyu
Song By: Lay Phyu & Iron Cross
Song Title : အလှဆင်လိုက်ပါ ဒီကမ္ဘာ
Myanmar Lyrics: Myint Moe Aung
အိမ်အပြင်ဘက် လှမ်းထွက်ချိန်၊ နေရောင်အလင်း ရောက်ရှိလာ
နေ့ ကောင်းကင် ဒီလက်ဆောင်၊ ပျော်စရာ ကမ္ဘာ တို့ အတွက်လား
အတူတူ တစ်မိုးထဲ အောက်မှာ၊ ဝေမျှခြင်း ချစ်မေတ္တာ
ကမ္ဘာကြီးကို အတူအလှဆင်၊ တို့ အချစ်များ
သန်းကောင်ယံထဲ လမ်းပျောက်ချိန်၊ ကြယ်ရောင်အလင်း ရောက်ရှိလာ
ညကောင်းကင် ဒီလက်ဆောင်၊ အမှောင်တွေပယ် ခွင်းဖို့ လား
အတူတူ တမိုးထဲ အောက်မှာ၊ ဝေမျှခြင်း ချစ်မေတ္တာ
cho : ဒီလယ်ကွင်းနဲ့တောအုပ်တို့ ဖြတ်ကျော် ချစ်မေတ္တာရဲ့သီချင်း
မြစ်ရိုးများ တလျှောက် လေဆန်ကျော်လွန်ရင်း
မာန်ပြင် ပင်လယ်ရေပြေလှိုင်းများနဲ့မိုးစက်တွေဖြတ်လို့ 
ပျော်ရွှင်ခြင်း သီချင်းများစွာ၊ လေပြည်ထဲ ပျံ့လွင့်လာ
အိပ်မက်တွေ အတူမက်ကာ၊ ရင်ခုန်သံ နားစွင့်ထား
ရှင်သန်ခြင်း နေ့ သစ်ကမ္ဘာ၊ အတူလက်တွဲ ခရီးဆက်မှာ
ကမ္ဘာကြီးကို အတူအလှဆင၊် တို့ အချစ်များ
cho : ..
ရှင်သန်ခြင်း နေ့ သစ်ကမ္ဘာ၊ အတူရင်ဆိုင် ခရီးဆက်ပါ..
ဒီ ကမ္ဘာကြီး အလှဆင်ပါ… တို့ အချစ်များ…
ဒီ ကမ္ဘာမြေ လှပဖို့ ... တို့အချစ်များ…
Thanks to ZNMT and THKZ
Posted by Nay Nay Naing at 11/26/2006 02:14:00 AM3comments
ဒီနေ့သောကြာနေ့ ဆိုတော့ နောက်ရက်တွေ အားပြီး အလုပ်လည်းသွားစရာမလို တော့ဘူးဆိုတော့ အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် နဲ့dinner သွားစားဖြစ်တယ်။ မြို့ ထဲကို မရောက်တာ ကြာပြီဖြစ်လို့လူတွေအများကြီကို တွေ့ ရတာ၊ X’mas အတွက် ပြင်ဆင်ထားတာတွေ တွေ့ ရတာတွေ မျက်စိထဲမှာ အထူးအဆန်းဖြစ်နေသလိုပဲ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် နောက်ကျနေတာနဲ့ရောက်နေတဲ့ တစ်ရောက်နဲ့ ဈေးဆိုင်တွေ ခဏ လျှောက်ကြည့် ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ နောက် တစ်ယောက်ရောက်လာမှ ပဲ dinner သွားစားဖြစ်တယ်။ သုံးယောက်သား ဗိုက်ဆာဆာ နဲ့ အ၀ စားပြီး (သူတို့ နှစ်ယောက် ၀ မ၀တော့ မသိဘူး၊ ကိုယ့်ဟာကိုတော့ ၀အောင်စားလိုက်တယ်) စကားခဏပြော ပြီးတော့ ပြန်မယ်ဆိုပြီး လမ်းလျှောက်လာကြတာ လမ်းမှာ လက်ကမ်းကြော်ငြာတစ်ခုရလို့ကြည့်လိုက်မှ ဒီနေ့ညဟာ Late Night Shopping ညမှန်း သိလိုက်ရတာနဲ့သုံးယောက်သား အိမ်ပြန်ဖို့စိတ်မ၀င်စားကြတော့ ပဲ Shopping လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး သွားလိုက်တာ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်ကြတော့ ည ၁၂ ခွဲခါနီးရှိနေပြီ။ မှတ်မှတ်ရရ ပေါ့။ ဒီရောက်တာသာကြာနေပြီ ဒီနိုင်ငံမှာ တချို့အချိန်တွေမှာ Late Night Shopping ဆိုပြီး ရှိတယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် တစ်ခါမှ ညဖက် shopping မသွားဖြစ်ဖူးဘူး။
Late Night Shopping ဆိုတာလာလဲ။ ပုံမှန်ဆို ဒီမှာ ဆိုင်တွေက ၉ နာရီလောက်ဆို ပိတ်လေ့ရှိပေမယ့် အဲ့ဒီညဆို ၁၂ နာရီအထိ တချို့ ဆိုင်တွေဖွင့်ကြတယ်။ ည ၉ နာရီနဲ့၁၂ နာရီကြားမှာ ၀ယ်ရင် အဲ့ဒီ ဆိုင်တွေမှာ Special Discount တွေ ရှိတယ် လို့ရေးထားတာကို ဖတ်လိုက်ရတာပဲ။ မနေ့ က ရတဲ့ ကြော်ငြာထဲမှာ ရေးထားတာတော့ Late Night Shopping က့ Last Friday Of Every Month မှာ ရှိတယ်လို့ပြောတာပဲ။ Internet မှာရှာကြည့်လိုက်တော့ ဒီဟာက လွန်ခဲတဲ့ July က နေပြီး ၄ လ အတွင်း EveryMonth of Last Firday Night မှာ လုပ်ရှိမယ်ပြောထားတာတွေ့ ရတာ့ ဒီညက နောက်ဆုံးညပေါ့။ ဒါပေမယ့် မနေ့ကတော့ တွေ့ ရတာ December လမှာလည်း Late Night Shopping Days တွေရှိသေးတယ်။ Shopping သွားချင်သူတွေ သွာလို့ ရအောင် Information လေးပေးလိုက်ဦးမယ်..
Come December, Late Night Shopping will be extended to come shopping malls in the Orchard Road and Marina Bay Areas:
Malls at Marina Bay on 8,9, and 16 December
Malls at Orchard on 15,16,22 and 23 December
ဒီနေ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင် ၀ယ်ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကြီးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောင်နှစ်တွေလည်း ဒီလရောက်တိုင်း လခတိုးပြီး လက်ဆောင်တွေ များများ ၀ယ်ပေးနိုင်ပါစေ။
Posted by Nay Nay Naing at 11/24/2006 04:06:00 PM 1 comments
Thanksgiving ဆိုတာ နိုဝင်လာလရဲ့ နောက်ဆုံး ကြာသာပတေးနေ့ ။
အဲ့ဒီနေ့ က ဘာနေ့ လည်း၊ ဘာကြောင့်ဖြစ်လာလည်း သေချာမသိပါဘူး။ သိချင်တဲ့သူများ Wiki - Thanksgiving မှာဖတ်လို့ ရတယ်။ Google လုပ်လိုက်လဲရတယ်လေ။ ထားပါ... ခုကျွန်မသိတာ တစ်ခုကို ရေးချင်လို့ ။ ဘာလည်းဆိုတော့ တစ်ချို့နိုင်ငံတွေမှာ အဲ့ဒီနေ့ က အလုပ်ပိတ်ရက်တဲ့။ ဒါနဲ Thanksgiving ဆိုတဲ့နေ့ ကို ကျွန်မသဘောကျသွားတယ်။ တစ်ခြားအကြောင်းလည်း ရှိတာပေါ့။ Thanks giving ဆိုတဲ့ နာမည်ကလေးကိုလည်း နှစ်သက်မိတယ်။ ခုကျွန်မရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမှာတော့ အဲ့ဒီရက်က အလုပ်ပိတ်ရက်မဟုတ် ပါဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှတင် မဟုတ်ပါဘူး ကျွန်မနေဘူးတဲ့ နိုင်ငံတွေ အားလုံးမှာ အဲ့ဒီနေ့ က အလုပ်ပိတ်ရက် မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ အင်း.. အဲ့ဒီနေ့အလုပ်ပိတ်တဲ့ ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံမှာ နေချင်မိတယ်။ နောက်နှစ်တော့ အဲ့ဒီနေ့အလုပ်ပိတ်ရက်ဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံကို အဲ့ဒီအချိန်မှာ ရောက်အောင်သွားဖို့ကြိုးစား ကြည့်လိုက်ဦးမယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/24/2006 09:42:00 AM0comments
ကျွန်မ ရန်ကုန်က ထွက်လာတဲ့ နှစ်ကလွဲရင် မွေးနေ့ ဆို မနက်စောစော ဘုရားရှစ်ခိုး၊ အိမ်ကိုဖုန်းခေါ်၊ ပြီးရင် ကျောင်းသွား၊အလုပ်သွား၊ ညနေ အချိန်ရမယ်ဆို အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်း ၂ ယောက်၊ ၃ ယောက်နဲ့မုန့်သွားစားတာကလွဲရင် တခြား ဘာမှ လုပ်လေ့မရှိခဲ့ဘူး။ မုန့် သွားစားတာကလည်း အားလုံးက အလုပ် လုပ်နေကြတာဆိုတော့ မွေးနေ့ ရက်မှာ သပ်သပ်သွား မစားဖြစ်ပဲ အားတဲ့ နေ့ မှသာ သွားစားဖြစ်တာများပါတယ်။ ဒီနေ့ တော့ ကျွန်မရဲ့ ဘလောခ့်တွေနဲ့ နေးတစ်ဖိုရမ် ကတဆင့်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရယ်၊ ကျွန်မ အရင်ထဲက ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ညစာ သွားစားဖြစ်ခဲ့တယ်။ တကယ်ကို ပျော်စရာကောင်းတဲ့ အမှတ်တရ ပွဲလေးတစ်ခုပါပဲ။
ဒီမှာတော့ အမှတ်တရ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံတစ်ချို့ .. ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာတွေက အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် အစားအစာပုံပဲ တင်လိုက်တော့မယ်။ သတိတရ camera ယူလာပြီး စောစော ၀အောင်စားပြီး သူများတွေ မစားခင်၊ စားနေချိန်မှာ နဲ့စားပြီးချိန်တွေမှာပါ ဓာတ်ပုံတွေလိုက်ရိုက်ပေးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါက သူတို့ ပေးတဲ့ မွေးနေ့ လက်ဆောင်..
ဒါကမွေးနေ့ cake. မီးဖိုနားထားမိလို့အဲ့လို ဖြစ်သွားတာ၊ ဒါပေမယ့် စားလို့ ကတော့ ကောင်မှကောင်း.. မီး မမှုတ်ခင်က ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ သတိမရကြဘူး၊ cake လှီးတော့မယ်ဆိုမှ ကို TZA က သတိတရနဲ့သူများတွေကို ပြချင်ရင် ပြနိုင်အောင်ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံလေး ရိုက်ပေးခဲ့တာပါ။ cake ၀ယ်ပြီး၊ သယ်လာပေးတဲ့ မမေနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးတဲ့ ကို TZA ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
တကယ့် original cake ပုံစံက ဒီလိုလေးပါ ရှင့်... cake ကြီးကလည်း မလှဘူး ထင်မှာဆိုးလို့နဂိုပုံလေးပါ ပြထားလိုက်တာပါ
ဒီမှာကတော့ မစားခင် ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေ..
နောက်ပြီး နောက် ကမ္ဘာကျော်ဖြစ်လာမယ့် လူသား ၁၀ ယောက် ရဲ့ အမှတ်တရ လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ ဆုတောင်း ကတ်ကလေး.. လက်မှတ်တွေနဲ့သူတို့ ဆုတောင်းတွေ scan လုပ်ထားတာတော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလက်မှတ်တွေကို သူများတွေ ရကုန်မှာဆိုးလို့Blog မှာတော့ ပိုစ့်မလုပ်တော့ပါဘူး။
ဒီမှာက ကောင်မလေး ကိုယ်တိုင်လုပ်ထားတဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ မွေးနေ့ကတ်ကလေး
ကျွန်မရဲ့ မွေးနေ့ ကို အမှတ်တရ ဖြစ်စေ၊ ပျော်ရွှင်စေခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/23/2006 01:23:00 PM3comments
ဒီကဗျာလေးကို မွေးနေ့ ဆုတောင်းအနေနဲ့ ရတာပါ။ ကြိုက်လို့ အမှတ်တရ ဒီမှာမှတ်ထားလိုက်တာ။ မွေးနေ့ မှာ ဖုန်းဆက်ပြီး ဆုတောင်းပေးတဲ့ အပြင် ဒီကဗျာလေးပါ ပို့ ပေးတဲ့ မ TDO ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မွေးနေ့ ကို အမှတ်ရပြီး ဖုန်းဆက် ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ sms ပို့ ပြီး ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ အီးမေးပို့ ပြီး ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မွေးနေ့ဆုတောင်းကတ်ပို့ ပြီး ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့နေးတစ် ဖိုရမ်က သူငယ်ချင်းတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by Nay Nay Naing at 11/22/2006 11:35:00 PM0comments
ဒီသီချုင်းလေးက တော့ အချစ် အကြောင်းရေးထားတဲ့ သီချင်းလေးပါ။ တကယ်တော့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က တချိန်ချိန်မှာ အရင်းနှီးဆုံး လူသားနှစ်ယောက် ဖြစ်ကြဖို့ ပါ။ ခုတော့ ချစ်သူနှစ်ယောက် ကြားဆက်ဆံရေးမှာ တစ်စုံတစ်ခု မှားနေတယ်၊ ဒီ အမှားလေးကို သိပြီး၊ အချိန်မှီသာပြင်ဆင်ခွင့်မရခဲ့လိုက်ရင် သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ အရင်းနှီးဆုံးတွေဖြစ်မလားပဲ၊ အဝေးဆုံးကို ရောက်သွားကြမယ်ဆို တဲ့ အကြောင်းလေး ရေးထားတာပါ။
ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ပြီး ကျွန်မ လူတွေ လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အမှားဆိုတာတွေ အကြောင်းတွေးမိတယ်။ ကျွန်မကို လူတစ်ယောက်က ငါက ဘယ်တော့မှ မမှားခဲ့ဖူးဘူး၊နောင်လည်း ဘယ်တော့မှ မှားမှာ မဟုတ်ဘူး လို့လာပြောမယ်ဆို ၊ ကျွန်မကတော့ ဒီလူဟာ တစ်စုံတစ်ခု မှားယွင်းနေတယ်လို့ထင်မိမှာပဲရှင့်။ တခါတလေ ကိုယ်ကမှားလို့မှားနေမှန်းမသိ ဖြစ်နေတာ သာရှိချင် ရှိမယ်၊ အမှားကြီးကြီးမားမားတွေ မလုပ်ခဲ့သေးတာသာ ရှိချင် ရှိမယ်၊ လောကမှာ အမှား လုံးဝ မလုပ်ဘူးခဲ့ဘူးတဲ့ လူဆိုတာ မရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်။ နောင် အမှား လုံးဝ မလုပ်ပါဘူးဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်။ လူမှန်ရင် အမှားနဲ့မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ အမှား မလုပ်မိအောင်ဆိုတာ ဘာမှ မလုပ်ပဲ နေရင်တောင် မရနိုင်ဘူးထင်ပါတယ်။ ဘာလို့ လည်းဆိုတော့ လူဖြစ်ပါရဲ့ ဘာမှ မလုပ်ပဲ နေတယ်ဆိုကတည်းက ဒီလူဟာ တစ်စုံတစ်ခုတော့ မှားနေတာပဲပေါ့။
တစ်စုံတစ်ယောက်က အမှားတစ်ခု လုပ်မိတယ်ဆိုတာကို ကျွန်မတို့သိခဲ့ရင် အဲ့ဒီလူကို ချက်ချင်း အပြစ်တင်၊ ရှုံ့ချ ဖို့ မကြိုးစားပဲ ဒီလူ ဘာကြောင့်၊ ဘာလို့ဒီအမှားကို လုပ်မိတယ် ဆိုတာမျိုးကို အရင်လေ့လာသင့်တယ် ထင်မိတယ်။ တကယ်ဆို တချို့ လူတွေက မသိလို့အဲ့ဒီ အမှားဆိုတာကို လုပ်မိကြတာပါ။ တခိ်ျု့လူတွေ ကြတော့လည်း မှားမှန်း သိသိကြီးနဲ့မှားပစေဆိုပြီး တမင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့လေ။ သိသိကြီးနဲ့အမှားကို ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်သူများကိုတော့ ကျွန်မ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ကြိမ်တစ်ခါ မသိလို့မှားမိသူတွေကို့အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားခွင့်လွတ် သင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။ တကယ်ဆို ကိုယ်လည်း သူ့ လို မသိပဲ မှားခဲ့တဲ့ အမှားတွေက နည်းတာမှ မဟုတ်တာ။
ကျွန်မတို့ တွေ ကလေးဘ၀ကနေ ခုချိန် အထိ အကြိမ်ပေါင်းများစွာ မှားခဲ့ကြတယ်။ မှားနေကြတယ်။ နောင်လည်း မှားကြဦးမှာပဲ။ အဲဒီ အမှားဆိုတာကို ကျွန်မတို့လုံဝ မလုပ်မိအောင် ရှောင်ဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပေဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ကြတဲ့ အမှားတစ်ခုကိုတော့ နောက်အကြိမ် ထပ်ခါထပ်ခါ မလုပ်မိအောင်တော့ ရှောင်လို့ရနိုင်တယ်။ ဒါက ကိုယ့်လုပ်ဖူးတဲ့ အမှားကနေ သင်ခန်းစာ ပြန်ယူတဲ့ သဘောပေါ့။
တချို့ကတော့ ပြောကြတယ်၊ ငါမမှားမခြင်း လုပ်ချင်တာလုပ်နေဦးမှာပဲတဲ့။ ကိုယ်တိုင် တစ်ခါလောက် မှားပြီးမှ နောင်တရ၊ အမှားပြင်၊ နောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ သဘောလား။ ဒါလည်း အဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အမှားဆိုတာ ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ပေမယ့် တခြားသူတွေ ကြုံတွေကြ၊ လုပ်မိကြတဲ့ အမှားတွေကို ကြည့်ူပြီး ကိုယ်လည်းသူတို့ လို အမှားမျိုးတွေ မလုပ်မိအောင် ကြိုးစားလို့ရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အမှားကတင်မဟုတ် သူ့ များအမှားကပါ ကိုယ်ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစာ ယူလို့ ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ အရာရာတိုင်းကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကြည့် ပြီးမှ မှားခဲ့ရင် သင်ခန်းစာယူ နောင်မမှားအောင်လုပ်ကြမယ်ဆို ကျွန်မတို့ဘ၀တွေက နဂိုက အမှားများရတဲ့ အထဲ မှားပြီးရင်း ဆက်မှားနေတော့မှာပဲပေါ့။
ကျွန်မလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ အမှားပေါင်းများစွာ၊ ကျွန်မမြင်တွေ့နေရတဲ့ အမှားလုပ်သူတွေ.. သိလျှက်နဲ့ မှားသူတွေ.... မသိပဲမှားသူတွေ.... လူသားတွေရဲ့ အမှားတွေ.. အမှားပေါင်းများစွာ…
အို.. ဒါတွေရေးရင်း စဉ်းစားမိတယ်။ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်နားထောင်ရာကနေ အတွေးများသွားတဲ့ ကျွန်မကရော တစုံတရာများ မှားယွင်းနေတာလား…
Posted by Nay Nay Naing at 11/21/2006 07:00:00 AM3comments
အချိန်မှီသာ ပြင်ဆင်ခွင့် မရှိခဲ့ရင် - မျိုးကြီး
Posted by Nay Nay Naing at 11/20/2006 07:34:00 AM2comments